चन्दा नपाएपछि विप्लबले मच्चायो हंगामा….हेर्नुहोस यस्तो सम्म गर्यो !! – PathivaraOnline
Home > समाचार > चन्दा नपाएपछि विप्लबले मच्चायो हंगामा….हेर्नुहोस यस्तो सम्म गर्यो !!
काठमाडौं, १ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले व्यक्तिगत उदेश्यका लागि आपराधिक कार्यलाई राजनीतिसँग जोडेर गैरकानूनी कार्य गरेको भनिरहेका बेला नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकर्ताले काभ्रे जिल्लामा क्रशर उद्योगमा बम विस्फोट गराएका छन् ।नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताले काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकाको चौकीडाँडास्थित कुनसाङ
लामाको क्रशर उद्योगमा आक्रमण गरेका हुन् ।उद्योगमा नेकपाका कार्यकर्ताले बम विस्फोट गराएर क्षति पु-याइदिएको प्रतयक्षदर्शीले बताए । बम विस्फोट गराएपछि उनीहरूले नारावाजी समेत गरेका थिए ।बम विस्फोटबाट क्रशर उद्योग परिसरमा रहेको एउटा क्रसर मेशीन, ३ वटा स्काइभेटर र ट्रिफर जलेर क्षति पुगेको स्रोतले जनाएको छ । विस्फोटबाट क्रशर उद्योगमा झण्ड दश करोड क्षति भएको दाबी स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीको छ ।
स्रोतका अनुसार नेकपाका कार्यकर्ताले क्रशर उद्योगका मालिक कुनसाङ लामासँग ५० लाख चन्दा माग गरेका थिए । लामाले चन्दा दिन अस्वीकार गरेपछि नेकपाका कार्यकर्ताले क्रशरमाथि बम आक्रमण गरेको स्रोतले जनाएको छ । काभ्रे प्रहरीले घटनाका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
यसअघि पनि नेकपाका कार्यकर्ताले चन्दा माग गर्दै कालिका कन्ट्रक्सनमाथि आक्रमण गरिसकेका छन् । त्यति मात्रै होइन नेकपाले निजी क्षेत्रको मोबाइल कम्पनी एनसेललाई पनि आक्रमण गरेर ठूलो नोक्सानी गर्दै आएको छ ।